Talyaaniga oo dekedihiisa "ka xidhaya" muhaajiriinta - BBC News Somali
Talyaaniga oo dekedihiisa "ka xidhaya" muhaajiriinta
Image caption Muhaajiriin dooni rabadh ahi badda la dhex sabbaynayso
Talyaaniga ayaa ku hanjabay inuu u diidi doono maraakiibka dalalka shisheeye leeyihiin in ay ku dejiyaan dekadihiisa dadka muhaajiriinta ah.
Hadalkani wuxu ku soo baxay warqad uu danjiraha Talyaaniga u fadhiya Midowga Yurub, Maurizio Massari, uu digniin ah in xaaladdu noqontay haatan mid "aan la sii wadi karin" ku siinayey Midowga.
Ra'isal Wasaare Paolo Gentiloni ayaa isna ku eedeeyey qaramada Yurub in "ay isha ka lalinayaan" duruufaha taagan.
Waxa la rumaysanyahay in afartii cishee la soo dhaafay dad tiradoodu gaadhayso 10,000 oo qof isku soo miidaamiyeen safar ay badda kaga gudbayaan oo ay kaga soo kicitimeen Woqooyiga Afrika.
In ka badan 73,000 oo muhaajiriin ah ayaa sannadkan gaadhay dalka Talyaaniga, taas oo ah tiro ka badan boqolkiiba 14 tirada sannadkii hore gaadhay.
Qiyaastii 2000 oo qof ayaa ku dhintay ama la la'yahay oo loo malaynayaa in ay ku qarraqmeen badda, hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga yaa iyaduna sheegtay in dadka badda isku biimaynaya badankoodu ka dhoofaan dalka Liibiya.
Liibiya ayaa noqotay marinka ay Yurub u maraan muhaajiriinta ka yimaad dalalka ka hooseeya saxaraha Afrika, Bangladesh iyo dalal ka mid ah jasiirad la moodda Carabta oo ay ka mid yihiin Masar iyo Suuriya. Dadkaa qaar badan oo ka mid ahi waxay ka qaxayaan dagaallo iyo faqri.
Ciidanka ilaalada xeebaha Talyaaniga yaa hormood ka ah isku duwidda hawlaha gurmadka ah ee lagu samato bixinayo dadkaas, laakiin maraakiibta muhaajiriinta u gurmada badankooda waxa leh ururro khayri ah waxa aanay maraakiibtaasi sitaan calamada qaramo kale oo ay ku jiraan dalal ka tirsan Midowga Yurub sida Jarmalka iyo Malta.